Gaadiidka Sanliurfa 65 waxay jabisay dhul cusub oo gaadiidka dadweynaha ah | RayHaber | raillynews
HometareenkaGaadiidka Sanliurfa 65 wuxuu jebin doonaa gaadiidka dadweynaha ee baska
29 / 08 / 2017 tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Degmada Shanlaynfa ayaa sii wadi doonta dib-u-dhiska gawaarida oo waxay furi doontaa xilli cusub oo ka mid ah gaadiidka dadweynaha iyadoo la iibsanayo basaska cusub ee 65.
Duqa degmada XNUM Nihat Ciftci, oo raba basaska in la furo bisha Sebtembar, ayaa faa'iido leh wuxuuna yiri "Sanliurfali waa u qalmaa adeegga ugu fiican".
oo waxay leedahay ugu weyn ee baabuurta gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka dalka Turkiga sida ay ratio dadka abaalmarinta Quality, Sanliurfa degmada Metropolitan helay a basaska cusub 65 11 ee September bilaabi doonaan adeeg. Degmada Magaaladda Magaaladda Magaaladda Magaaladda Magaaladda Magaaladda Magaaladda Magaaladda Magaaladda Magaaladda Magaaladda Magaaladda Magaaladda Magaaladda Magaaladda Magaaladda Magaaladda Muqdisho. Gaadiidka leh mitirka 20, mitirka 7, mitirka 25, mitirka 12 iyo mitirka 20 oo leh darajooyinka, kuwaas oo leh naafo naafo ah iyo adeega WIFI ayaa la siin doonaa safar raaxo leh oo loogu talagalay muwaadiniinta naafada ah BEL-SAN A. inay u adeegaan jirka dhexdiisa.
MADAXWEYNAHA CIYAARTA: WAXAAN UGU MUUJIYAY MUWAADIN MUHIIM AH IN SHANLIURFA
Maalgashiga muhiimka ah ee gaadiidka magaalada Sanliurfa muwaadiniinta farxad u keenaya duqa magaalada caasimadda Nihat Ciftci, ayaa sheegay in ay rabaan inay siiyaan gaadiid badbaado leh oo caafimaad leh magaalada.
Dabadeed Shanlıurfa ayaa sii kordheysa. Xaafadaha cusub waxay ku yaalaan magaalada Sanliurfa. Sida dariiqa, waxaan leenahay khadad degdeg ah waxaanuna sidoo kale ku darnaa khadad cusub sida waaxda gaadiidka ee xaafadaha cusub. Waxaan dooneynaa in aan Shanliyeurfa u guurno jawi caafimaad leh marka la eego gaadiidka. Waxaan horeyba u dhameystirnay iibsigeena baska 20 7, mitirka 25 12 iyo mitirka 20 oo leh mitir 18, oo aan qorsheynay labada sano ee soo socota, waxaana rajeyneynaa in aan muwaadiniinteena Shanlahaurfa ku soo bandhigi doono dhismaha muusikada bisha September. Gaadiidkeena 11 ayaa shaqayn doona ka dib Sebtembar waxaanan bixin doonaa gaadiidka dadweynaha ee Shanlahafa iyadoo la isticmaalayo gawaaridan si tayo fiican leh, si deg deg ah loona kalsoonaan karo. Waxaan sameynay maalgashi aad u muhiim ah oo aad u xoogan. Muwaadiniinta muwaadiniinta ee Şanlıurfa waxay u qalmaan wax kasta, waxaana u baahannahay inaan u kaxeyno goobahooda shaqada iyo guryahooda si habboon oo ay ula socdaan qoysaskooda iyo carruurtooda. Waxaan ku soo gabagabeynay shaqo wanaagsan iyo 11 September, Waxaan rajeynayaa inaanu adeegyadan u adeegi doono Sanliurfa oo iyaga u soo bandhigi doona.
Gaadiidka magaalada Sanliurfa